WAXA SABABAY JIRITAANKA PMPF | Puntland Maritime Police Force
Dhibta Burcadbadeeddu waa dhacdo ku cusub Soomaaliya waxayna ka timid dagaalka sukeeye ee dheeraaday oo soconaayay labaatankii sano ee u dambeeyay iyo maqnaanshaha ciidan amni ee Soomaali ah oo xoog leh. Burcadbadeeddu waxa ay hurisaa xasilooni darro ku soo kororta dalkeena burburay iyo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed oo guud ahaan xumaada, gaar ahaanna dhaqaalaha bulshada deggan xeebaha gobolkeena.
Masiibada ay keentay burcadbadeedu Somalia kuma eka. Burcadbadeeda Soomaalida ahi waa dhibaato caalami ah oo ay waajib tahay si midaysan in wax looga qabto. PMPF waxaa loola jeedaa in ay dhamaystirto istraatajiyooyinka hadda lagula dagaalamo barcadbadeedda, sida ciidamada badda fadhiya ee horjooga iyo sharciyada oo wax laga bedelo is loo sahlo maxkamadayntooda. Dawladda Puntland waxay wadaysaa in ay soo dhowayso taageerada, lana shaqayso, bulshada caalamku dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka burcadbadeedda iyo in amni iyo xasilooni lagu soo dabaalo Soomaaliya.